qaababka rahada galmada sarita - iftineducation.com
qaababka rahada galmada sarita
aadan21 / September 15, 2016
iftineducation.com – Runtii dumarku waa ay ka helaan galmada. badanaana waa ay ka fekeraan in ka badan Ragooda.
Waxay muujiyaan waxyaalo cajiib ah oo ay ku soo bandhigayaan in aad fahanto.
Cajiibyadaas ay soo bandhigayaan haddaad ka noqoto dhegweyna waxay leedahay Dhibkeeda.
Waxay si dahsoon kuugu sheegayaan qaababka galmo ee ay aadka uga helaan dumarku, Markastoo ay idin dhex marayso ciyaarta sariirta, markastoo aad wacdare ka muujisana Waxaad ka dareemaysaa wajiga subaxdii ay la soo toosto.
is qurxintoodu waxa ay ka turjumaysaa sida ay diyaar ugu tahay in ay hesho nin rag ah oo ka qanciya waxyaalaha ay ka tabayso nolosha.
Haddaba waxaa jira dhowr qaab oo galmo oo ay dumarku aad u jecelyihiin ninkii ku Dhaqaaqana ay siinayaan jacayl
aad u baaxad weyn, waa hubaal in nin waliba uu ku taamayo siduu uga heli lahaa dhanka saaxiibtiis jacayl iyo qabow iyo debecsanaan balse waxaa laga yaabaa in uu ka dhaga xiranyahay sidii uu u kasban lahaa qalbiga ku xiran dheregta sariirta,
maxay yihiin qaababkaasi maxaase ka Dhalan kara? waa su’aalaha aan rabno in aan halkan kaga jawaabno.
Madaxweynaha Uganda oo Taariikh Ku Qabsatay Xalay Muqdisho
amin art waa qabiilkee